UNWTO inoda kuti WTTC ikundikane: Mexico neDominican Republic inotambwa naZurab Pololikashvili
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » UNWTO inoda kuti WTTC ikundikane: Mexico neDominican Republic inotambwa naZurab Pololikashvili
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Investments • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
WTTC Global Summit yakarongerwa kuunza vatungamiriri vemaindasitiri ekufamba pamwechete muCancun muna Kubvumbi 25-27. Chiitiko ichi chave nemakwikwi muDominican Republic nekuda kwenzira yakashatirwa nemunyori mukuru weWorld Tourism Organisation (UNWTO). Uku ndiko kupera kwekushandira pamwe kunodiwa zvakanyanya pakati pevanhu vakazvimiririra uye veruzhinji indasitiri yekufambisa neyekushanya?
Kufamba uye Tourism zviri padhuze. Mamirioni emabasa ari panjodzi uye UNWTO Secretary-General anozivisa hondo neWTTC.
Inokurumidza kudiwa kudyidzana kudzosa ushanyi kudzoka kuita makakatanwa akagadzirwa nemunhu mumwe, UNWTO Secretary-General achikonzera Mexico neDominican Republic kubatwa nemoto.
Kushanya kuchaenda kupi neUN Agency inoona nezvekuda kuparadza nhaurirano inodiwa zvakanyanya nevatungamiriri vepamusoro veyakazvimirira neyeveruzhinji chikamu?
"Zurab harisi benzi sezvo nyika yaifunga… he is mean… munhu akaipa."
Aya ndiwo mazwi aJuergen Steinmetz, muvambi we World Tourism Network uye muparidzi we eTurboNews. Kuramba basa riri kuitwa neWTTC, kwakafanana nekurova kumeso kumabhizimusi makuru ekushanya nekushanya, nhengo dzeWorld Travel uye Tourism Council (WTTC).
Gloria Guevara, CEO weWTTC akataura: “Nhengo dzedu dzakatsamwa. Secretary-General weUNWTO, Zurab Pololikashvili, ava kuyedza kuramwa chiitiko chedu. Ndine shungu nekushungurudzika. "Ino ndiyo nguva inoda kuti vatungamiriri vashande pamwe chete kwete kuramwa mabasa."
Global Guevara yanga ichirwa kunge pasina mumwe munhu wekuchengetedza indasitiri yepasirese yekufambisa pamwe neyekushanya pamwechete uye ichishanda. Akanga aripo kumitezo yake kubva panguva iyo denda rakatanga.
"Ini naGloria hatina kumbogara tichifunga zvakafanana maringe nemabatiro atingaite dambudziko iri, asi tinoremekedzana," akadaro Juergen. “Munhu wese anehunhu anonzwisisa kuti kufambira mberi kunogona kuwanikwa chete kuti munhu wese ashande pamwe chete. Secretary-General weUNWTO achikumbira vatungamiriri vakakosha kuti vaende kumusangano weUNWTO wakaiswa pamwechete paminiti yekupedzisira pazuva chairo iro musangano weWTTC uri kutuka kwete kuWTTC chete asi kune avo vari kuyedza kuponesa iyi indasitiri uye nehurongwa hweUnited Nations se zvakakwana. Iyo Dominican Republic inobata chiitiko chakadai uko makambani mazhinji emitezo eWTTC anoita bhizinesi akapfupika. Tourism ndiyo chikamu chikuru cheGDP reDominican Republic, uye zvinofanirwa kunge zviri mukuda kweHurumende yeDR kuti iremekedze chero munhu anoshandira chinangwa chimwe chete kutangazve iyi indasitiri inokosha. ”
Gloria Guevara kubva kuMexico ndiye CEO weLondon-based World Travel and Tourism Council (WTTC), sangano rine nhengo mazana maviri + dzakaumbwa nemakambani makuru pasi rose rekufamba nekushanya Vazhinji vanoti WTTC inomiririra masangano akazvimirira mukushanya . World Tourism Organisation, UNWTO isangano reUnited Nations Affiliated Agency uye inofanirwa kumiririra bazi rehurumende. Zurab Pololikashvili, 200, anobva kuRepublic yeGeorgia ndiye aripo UNWTO Secretary-General.
Kusvikira kumagumo a2017, UNWTO uye WTTC yakashanda semapatya e siamese mupasi rose rekufamba nekushanya. Izvi zvaive pasi pehutungamiriri hwaDr Taleb Rifai anobva kuJordani, saimbove Secretary-General weUNWTO Pololikashvili asati atora chigaro chemubati.
Dr. Taleb Rifai naDavid Scowsill
IWorld Travel & Tourism Council inoonekwa seye masimba epasirese pane ehupfumi nemagariro zvipo zveTravel & Tourism. Pamberi pekushandurwa kwehutungamiriri hweUNWTO, aimbova CEO weWTTC, David Scowsill, naDr Taleb Rifai vanga vachishanda vakabatana kusimudzira iyi indasitiri yakakosha yepasirese.
Zvese izvi zvakachinja muna Ndira 1, 2018, apo Zurab yakatora nzvimbo. UNWTO yakave yakavharwa sangano inotungamirwa nemurume mumwe achishandisa kutyisidzira, uye rusaruro kuchengetedza chinzvimbo chake.
Kusarura mukudzosera mavhoti kwaive iko kwekutanga kunyangwe nyika payakatanga kupfuura nedambudziko rakaipisisa rakamboitika - COVID-19. Hakuna kumbove nemusangano mumwe chete wevatapi venhau apo vezvenhau vasingateedzere vakabvumidzwa kuenda kana kubvunza mibvunzo kubva muna Ndira wa2018. UNWTO yakatanga kuona WTTC semukwikwidzi uye kwete semubatsiri. Aimbova Secretary-General Dr. Taleb Rifai anga asisagamuchirwa kuenda kumitambo yakakosha, senge UNWTO General Assembly. Gloria Guevara haana kubvumidzwa kutaura pazviitiko zvakadaro uye akagara pachigaro chekupedzisira.
Nyika yakamira kutarisa UNWTO, asi ndiani mumwe aripo kuti atendeukire munharaunda yehurumende:? Zurab yakuratidzira zviitiko zvakaita seWorld Travel Market, IATA, zviitiko zveICAO, uye zvimwe zvakawanda. Panguva imwecheteyo, vanhu vanoshanda kuUNWTO vakataura kushungurudzika kwavo muchivande, asi ivo havadi kuburitsa pachena zvirevo, sezvo vari kunetsekana nemabasa avo kana vakataura chero chinhu izvo Secretary General asingadi.
MunaNdira, Zurab yakaita kuti zvisakwanise kuti mumwe munhu anokwikwidza awane mukana wakakwana musarudzo yeSecret-General, achivimbisa kuti achachengetedza zita iri rine mukurumbira kwemamwe makore mana. Muna Ndira haana kuremekedza Humambo hweBahrain kutora nzira yake.
Anopinda mukati kuUNWTO akaudza eTurboNews, "Anoparadzanisa vanhu uye anogara achiramba zviitiko nezviyero zvisiri zvake."
Gloria Guevara anga achiedza kuburitsa pamwe chiitiko chakakosha kwazvo kune vega uye veruzhinji kubva pakaitika denda iri. Iyo WTTC Summitnext mwedzi yakagadzirirwa kuti vatungamiri venyika vashanyi vasangane pane iri kuuya Global Summit muCancun. Kupesana nematambudziko ese uye kunyangwe nyowani rekodhi COVID-19 dhata muMexico pamwe neyechitatu Coronavirus wave muEurope, Brazil ne Africa, WTTC yakatsunga kuita iyo Global Summit 2021 chiitiko chebudiriro chekuisa ramangwana reKufamba neKushanya pane zvakanakisa. track inogona.
Iyo yakanyanya-inofungidzirwa WTTC 20th Global Summit, yakarongeka mukubatana pamwe ne Hurumende yeQuintana Roo uye ichaitirwa muCancun, Mexico, kubva Kubvumbi 25-27, 2021. Hapana chinhu chakaponeswa kuita kuti chiitiko ichi chive chakachengeteka uye chishande kune avo vanopinda mumuviri kana zvirinani.
Mumwe mukuru wehurumende anobva kuMexico akaudza an eTurboNews kunobva kuti nyika yakatsamwa neUNWTO neDominican Republic nekuparadza chiitiko ichi chaitarisirwa kwazvo muCancun.
Heano mafambiro akaita iyi fiasco yese.
Mwedzi wapfuura sechiratidzo chekuvimba nekushanya kweDominican, Secretary General weUNWTO Zurab Pololikashvili aive kuzororo muDominican Republic nemhuri yake.
Kuti ashandure zororo rake kuti rive musangano unobatanidza zvese uye ungangove wakabhadharwa, akatora mukana kushanya nemutungamiri weDR Luis Abinader pazuva rake rekupedzisira rekuzorora. Akaudza gurukota rezvekushanya, David Collado, kuti Dominican Republic inzvimbo yakachengeteka yekushanyira, achiti Dominican Republic muenzaniso munyika yekutarisisa kunogona kutarisirwa nezvirongwa zvine hunyanzvi munguva yeCOVID-19 ichikwanisa kukwezva nyika dzepasi rose. vashanyi vane hutano kuchengetedzeka.
VANOGONA Gurukota Rezvekushanya kuDominican Republic David Collado, uye UNWTO Sec Gen Zurab Pololikashvili
Vazhinji vangangoita mari yakawiriranwa kuna Secretary-General, Ministry of Tourism yeDominican Republic yakatumira tsamba kuMinistry of Tourism nevatungamiriri veindasitiri muAmerica, kusanganisira United States nezuro.
Tsamba yacho inoti:
Ndiri kufara kutumira kukoka kwakabatana kubva kuna UNWTO Secretary-General, HE VaZurab Pololikashvili, uye Gurukota rezvekushanya kweDominican Republic, VA Mr. David Collado, kuti vapinde musangano weMakurukota eVashanyi veAmerica, yakaitwa kubva 26 kusvika 28 Kubvumbi 2021 muPunta Kana, Dominican Republic.
Dhipatimendi reDunhu reAmerica
Nhasi mukuru weHurumende muDominican Republic adzivirira kukokwa achiti vane rimwe zuva remusangano wavo ravakabvumirana panguva yezororo remhuri rinoshanda reZurab. Aive Zurab Pololikashvili uyo svondo rapfuura akakumbira kushandura mazuva emusangano kumisi mimwechete ichaitwa musangano weWTTC.
Izvozvi zvinopa sarudzo yekuona kuti ndiani ane UNWTO uye ndiani ari neWTTC. Isarudzo inorwadza kuziva kushanya kweimwe yemativi akaipisisa mudambudziko rino renyika. Vatungamiriri vezvekushanya vanogona kunge vasisiri vese mune izvi pamwechete.